दूर्जेय चेतना: विडम्बना (लघुकथा)-रिमिक्स
Browse » Home » कथा » विडम्बना (लघुकथा)-रिमिक्स
11 comments to “विडम्बना (लघुकथा)-रिमिक्स”
गज्जब मजाले रिमिक्स गर्नु भएछ । कथाको अन्तमा आएको विल्कुलै नयाँ मोडले यसलाई 'ओरिजिनल' भन्दा निक्कै राम्रो बनाएको छ ।
हुन त नेपलमा मोबाईल भित्रनु अगाडि र तुलनात्मक रुपमा नेपाल हालको भन्दा धेरै शान्त रहेको बेलामा यो कथा लेखीएको थियो तर पनि समय अनुसारको यथार्थ मसला प्रयोग गरेर तपाईले झनै रोचक बनाईदिनु भयो ।
मलाई एउटा रमाईलो कोटेशन पनि याद आयो :
"Love at first sight is possible.....but it is always better to haveasecond look"
मेरो कथाहरुलाई पनि "second look" दिने बेला भएको जस्तो लाग्यो ।
समय अनुसार परिस्थिति र घटनाहरुलाई 'भिन्न भिन्न कोण' बाट पनि हेर्न तपाईको यो कथाले मलाई सधैं प्रेरित गर्ने छ ।
हा हा हा !!मलाई साहैं रमाईलो लाग्यो अनि हाँसो पनि। अब अरु त यो भन्दा बढी के भनुम र!!!
विनिर्माणतिर लाग्नुभएछ त दुर्जेय जी । सिर्जनाभन्दा पुन:सिर्जना झन् गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ । मूल लेखक र विषयको उचाइ र र मर्म पनि भाँच्नुभएन अनि त्यसभन्दा नयाँ पनि केही राम्रै दिन सक्नुपर्‍यो । तपाईँको प्रयासको सराहना गर्छु म ।
एकदमै राम्रो !! मैले पहिला पनि पढेको थिएँ दिलीप दाइको ब्लगमा तर रिमिक्स पढ्न पाउँदा झन् रमाईलो लाग्यो !! thumbs up to this remake !!!!
हाहाहा, साह्रो कडा रिमिक्स गर्नुभएछ । निकै मन पर्‍यो अनि दिलिप दाइ को कथा ले त्यतिखेर को कुरा बोलेको थियो, भने अहिले को स्थिति तपाई को कथा ले बोलेको छ । म त सम्झि सम्झि हाँसिरहेको छु । हाहाहा
दुवै कथाहरु पढ्न भ्याएँ, दुवैले आआफ्नो समयका विवशता र पिडाहरुको प्रतिनिधिनित्व गरेका छन, दिलिपजीको मूलकथा उत्कृष्ट छदैछ त्यसमा दुर्जेयजीको रिमिक्सले नया भाव सहित रोचकता थपेको छ । लघुकथाले देशको समय र स्थिति माथि चोटिलो व्यंग्य प्रहार गरेको छ ।
" ....उनीहरु त पासपोर्ट बनाउन जिल्लातिर लागेका रहेछन्" यो अन्तिम वाक्यांशले भित्र कता कता चसक्क बनायो ।
गजबले नै रिमिक्स भएछ । घत लाग्दो ।
टेलीफोन कै भए नि दिलीपदाईको बन्द ब्यापार सप्रिदा ख़ुशी नै लागेको थियो ... तर ब्यापार बन्द गरेर बिदेश तीर लाग्नु परेको देख्दा दुःख लाग्यो | तर के गर्नु अहिलेको परिस्थिति नै उस्तै छ ...
कम्तिमा ख़ुशीको कुरा कहाँ नेरी छ भने देशमा हरेकको हातमा मोबाईल आएछ ... हरेकले गाऊं गाऊं मै कानूनी उपचार पाउन थालेछन ..
जे होस दुर्जेयजीको नौलो प्रयासलाइ चाहीं मान्नै पर्छ...हो नि समयानुकूल नरहे साहित्य कहाँ सान्दर्भिक साहित्य रहन्छ र, ईतिहास भई हाल्छ नि ...
geet remix garne harule pani tapaai sikos kasari remix garnuparchha bhanera.
ल अब लघु कथा पनि रिमिक्स भएछ। मज्जाले रिमिक्स गर्नुभएकोमा धन्यबाद दूर्जय जी लाई।
रिमिक्स ले पुरानो कथाको सम्झना परिवेश अनि नयाँ परिवेश एकै चोटी पस्कन भ्याउने रहेछ ,त्यसैले दुर्जेय जी को यो पस्काइ राम्रो लाग्यो ।